Tsala kunye ukujongana nobunzima
Ngo-Februwari 2019, Mnu Lin Yuanzhong, owayesakuba ngumqeshwa we-Changheng Inkampani, ngelishwa waphathwa ngumhlaza wemiphunga. Inkokeli yenkampani yazisa bonke abasebenzi kwiqela le-WeChat lenkampani kwaye yenza umnikelo ngokukhawuleza. Abasebenzi nabo bathathe inxaxheba ngenkuthalo ...
I-CORBITION yathatha inxaxheba kwi-8th China (Shanghai) yeTekhnoloji yeLizwe yeTekhnoloji yokuThengisa kunye nokuThumela ngaphandle
Inkampani yolungelelwaniso yanikwa isihloko seshishini elihlawula irhafu eShanghai. Oku kukuqinisekiswa kwetekhnoloji ye-CORBITION, kodwa kunye nokubuyela kwabo bonke abasebenzi be-CORBITION eluntwini. Kwixesha elidlulileyo le-8 i-China (i-Shanghai) yeTekhnoloji yeLizwe yokuThengisa kunye nokuThumela ngaphandle, iimveliso zethu ...
I-CORBITION New Year Party
Kumnyhadala weNtwasahlobo ka-2020, ukuze kuliwe ne-COVID-2019, Inkampani ye-CORBITION ifumene imiyalelo kurhulumente ofanelekileyo ukuba alungiselele ukuqala kwakhona kwemveliso kwangaphambili. Ukungabikho kwezixhobo kunye nabasebenzi, Mnu.Ge Bingda, usihlalo wenkampani, usebenze imini ...